Uhlolojikelele BlackBerry Torch 9800: umbono usomabhizinisi abanolwazi — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Uhlolojikelele BlackBerry Torch 9800: umbono usomabhizinisi abanolwazi
Ake sithi wena uchithe isikhathi esiningi emgwaqweni futhi ngesikhathi esifanayo angathanda ukuba uhlale uxhumene futhi nokufinyelela njalo ulwazi lebhizinisi lakho, futhi osheshayo izicelo. Ngalo mqondo, esiwusizo kakhulu ngokulandela imfihlo kanye nokusetshenziswa smartphone elula entsha kubonakala BlackBerry Torch 9800. It is kakade eyaziwa isinciphisi emhlabeni wonke nge esithintwayo, uhlelo yokusebenza BlackBerry OS 6 kanye QWERTY-keyboard, owathatha SurePress ubuchwepheshe. Kulesi ukubuyekeza, sicabangela Torch entsha ngombono ibhizinisi umsebenzisi abanolwazi. Lapho ngixoxa nabantu ngezindaba ukubukwa zabanye abantu, hhayi nje siqu umbono wokuqala, futhi ngizozama ukuchaza ngokuningiliziwe indlela Torch asingatha izicelo imiyalezo esheshayo, ekwenziweni zokushaya ucingo kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezibalulekile. Masiqale ...
Ngiyaqiniseka kakhulu. Ngokuvamile ithemba lami ngokweqile ingishiyile. Nice ukubona abasebenzisi bayanda abakhetha BlackBerry for okusheshayo e-mail, imiyalezo esheshayo, futhi omuhle kakhulu izingcingo quality phone, kodwa-ke ngeshwa, lokhu akulona iqiniso kwalesi smartphone.
Well, ukubekele eceleni thina esikuthandayo. Isisindo kanye nobungako ncamashi Torch smartphone smartphone Storm 2. Storm Series akuyona izimiso zami, naphezu kweqiniso lokuthi kusenzima BlackBerry. Futhi, niyazi, uma ngelinye ilanga wenze ukukhetha kwakho mayelana brand idivayisi kuze kube sekugcineni lweli brand inikezwe. Ezinsukwini ezimbalwa away nje ukuba ukujwayela ukusebenza Torch, kodwa ngemva kokwenza imizamo emikhulu ukuze lokhu, kancane kancane siqale ukuba uqaphele ukuthi izinto akukubi kangako. Ake sihlolisise inkinga nge smartphone yakho.
The hardware okuyingxenye
Keyboard (physical) — ikhibhodi kubonakala efika kuqala kancane enyinyekile futhi lushone, sengathi bophezela emuva ngaphakathi emzimbeni, uma kuqhathaniswa uchungechunge ikhibhodi Bold noma Ijika. sobala Masinyane ukuthi Itholakala indiza ngaphansana esithintwayo. Kuthatha a lot of umzamo yokwelula imisipha ubuye utetayete iminwe ukuze kuzuzwe elilungile isivinini zokunyathelisa. Ngaphezu kwalokho, edingekayo lobubhalo isibili: Isikhanyiso esikhulu ukuze uzitholele usebenzisa Torch ikhibhodi lapho uxhumeke ikhebula le-USB smartphone (bheka isithombe ngezansi).
Trackpad - trackpad ekahle ukuqaliswa imisebenzi ehlukahlukene ukuthi ezidinga ngokunemba, ezifana Kopisha unamathisele, kanye umbhalo control uma uhlela. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela nokusekela mshini (trepada) on zokuthinta isikrini nezinye Smartphones ingenye sezizathu ezenza ngingafuni ukuwasebenzisa. Angikwazi ukulawula izinto emsebenzini, uma Ngithathe njalo usaphatha izinhlamvu ebhokisini waqokomisa esibukweni.
Keyboard (on-screen) — Lokhu wesitayela sekhibhodi SureType FTW. Uma ufuna ukusebenzisa ikhibhodi ekwiskrini in "portrait" Imodi format, side zibheka, uzilungiselele ukuzizwa ukungakhululeki abanye emsebenzini. Kulokhu, ngicabanga kudingeka ushintshe ukuze ikhibhodi mode SureType. Ukuze ufinyelele le ndlela, iya ku Izinketh> ukuthayipha Input> Keyboard> futhi ushintshe mpo uhlobo ikhibhodi (Portrait Keyboard Uhlobo) nge full (Full) ubukhulu encishisiwe (ancishisiwe). Ukusebenzisa ikhibhodi ekwiskrini, ngaphezu kwakho konke, okunye okuhle phakathi imihlangano ehlukahlukene kanye nemihlangano qembu, lapho kufanele kube khona njengoba kancane umsindo nezingahlobene nendaba ezahlukene, futhi, ngokufanele, akukho Ukuchofoza ikhibhodi.
Mshini isinciphisi luyimfanelo umnyuziki ngokwanele futhi kubonakala ziqine. You empeleni izitayela ezimbili BlackBerry kwelinye! Ngomqondo wokuthi ngikhuluma ngawe smartphone Torch Storm oyisibonelo "isimanga» — slide-out ikhibhodi. Uhlangothi reverse yaleli fomu isici kuzodinga isikhathi eside ukujwayela kwalo, kuphila kwami ​​bazibonela ngokwami ​​ukuthi ngokuvamile engaqondile chofoza esibukweni.
The accelerometer (ligijima inzwa screen) — batusa nokuzama ukusebenzisa Torch ngenkathi ushayela, noma elele phansi. I accelerometer ozwelayo ukuma, ikakhulukazi uma kuqhathaniswa Storm model. Noma kunjalo, ukuba khona kuleli zinga sensitivity ngeke ubuhlungu smartphone yakho, futhi kuba isihawu ukuthi nakuba kukhona elimangalisayo imidlalo 3D eziye shoka them. Njengoba kuphawuliwe kwezinye Izibuyekezo, lapho isinciphisi wavula ngomqondo obanzi ikhibhodi, isibonisi isethwe ku "portrait" Imodi format, zibheka welulela.
BB6 (BlackBerry OS 6) — Kuyishwa ukuthi kule smart phone ukuba ukusebenzisa ezizenzakalelayo isibonisi isitayela. Ubani ngempela udinga enye isitayela ikhasi namanje lisikisela ifolda Media-data noma umthwalo? Ikhono ukudala icons for contact esithile, iqembu koxhumana nabo izicelo for imiyalezo noma olunye uhlelo lokusebenza esibukweni "Izintandokazi» (Izintandokazi) kungaba wusizo, kodwa indalo othomathikhi kwemifanekiso zokusebenza Okusetshenziswa ( «wayevame ukusebenzisa") - akunakwenzeka. Kulokhu, kuwukuhlakanipha ukuletha yonke sezimpawu oda wafaka labo isithonjana desktop, okuyinto wena ngempela njalo udinga.
Mhlawumbe kungcono konke mayelana design, kodwa ngithola entsha uhlobo lohlelo lokusebenza 6 impela slow and efanele ngempela, ikakhulukazi uma usebenza nge zokuthinta isikrini. Ngezinye izikhathi kwanele kimi ukusebenza hotkeys ukudayela okusheshayo, ngesinye isikhathi ngangidinga ukusebenzisa zokuthinta isikrini. Futhi, kufanele kuqashelwe, kwakungeyona isipiliyoni best. "RIM" Companies kufanele silungise Nokho, kuyinto lesi simiso bug elikhona kuphela ku Torch smartphone.
— izingcingo usebenzisa umshini isinciphisi kungenziwa eziqhutshwa amakholi wefoni, ngesikhathi kuvulwa ngezilayisi - ukuphendula izingcingo, futhi noHezekeli, ekupheleni - izingcingo ekupheleni. It ngokuphelele wacabanga, kodwa kwase kuyiminyaka engaphezu kuka-10 edlule. Njengoba kubonakala skrini kwesikrini, aboniswe ngezansi, isofthiwe entsha smartphone design BB6 (BlackBerry OS 6) kuyefana kakhulu ngokubukeka software design zibe Storm tinkhulumo, omunye touch of a ngomunwe, ungakwazi ukufinyelela Ukudayela ilokhi yekhiphedi yezinombolo (Iphedi yokushayela), amanothi, eliyisiqalo, ikhalenda kanye oxhumana nabo ngesikhathi socingo. Ngeshwa, ukuntuleka ezahlukene smartphone wocingo volume. Kuyadingeka ukuba Ukusetha ivolumu iye ekucineni, ngisho nalapho esebenzisa hendseta (kwihendisethi) — kwihendisethi. Uma sizofeza izingcingo ibhizinisi ekamelweni ingqungquthela, uyozizwa lezi izimo.
Umlayezo osheshayo imiyalezo — Ukuphenya ukunyakaza elula ngomunwe wenziwa smartphone ukhululekile ngokwanele. Nokho, angikwazanga ukufeza kukopa ezidingekayo nokunamathisela ngalesikhatsi afundza ama-imeyili.
Kufanele kuqala uthumele umyalezo, bese ukopisha umbhalo okhethiwe we-imeyili ithunyelwe. Lena akuyona inqubo mnandi kakhulu, uma kubhekwa ukuthi lena smartphone agcwele. Qaphela ukuthi lokhu kungenye bug okungathí sina okudinga ukususwa.
In a ashukumisayo ibhizinisi imvelo, ochwepheshe kufanele bakwazi ukwenza izinqumo ezisheshayo kunoma iyiphi indawo. Ngalo mqondo, akukho lutho kungaba ngcono ukwedlula "RIM" Smartphones, ngazo ungathola ukufinyelela okungenamkhawulo ulwazi olufanele. With njalo switched futhi ixhunywe ku-Inthanethi nge smartphone yakho BlackBerry Torch wena ungachithi isikhathi ize eNkosini. Nokho, lokho okwashiwo ngenhla, ngokuyinhloko ahlobene ekugcwalisekeni kwezinjongo ibhizinisi.
Bewazi yini ukuthi uma kukhona on a ezinkampani server BlackBerry (BlackBerry Enterprise Server — Bes), ungakwazi ngokumandla ukufinyelela senethiwekhi ezimele yenkampani yakho? Ungahambisa ngaphakathi inethiwekhi, ngisho ukubuka amagama encwadini ikheli leseva sengathi ehlezi etafuleni lakho ehhovisi ... 4 GB of inkumbulo yangaphakathi - lena ibhonasi enkulu, ikakhulukazi uma ufuna ukuhlela amadokhumenti kudivayisi yakho. I ihlolwe lokhu usebenzisa isofthiwe DataViz Imibhalo To Go, bakude ulayishe futhi ubuke amafayela agcinwe kwi yangaphakathi intranet site. -3.2 ye-intshi zokuthinta isikrini ukwesekwa ngempela ivolumu real. Leli qiniso inikwe amandla Torch smartphone, abanesimo esithintwayo esikhulu, isiqeshana sokuhambisa iminwe futhi QWERTY ikhibhodi egcwele, ukuze kukhanye yonke inkazimulo yayo.
imibono emhlabeni wonke
Asivume. Namuhla, abantu ibhizinisi umenywe uhla ocebile kakhulu futhi ezihlukahlukene amafoni smart lemikhiqizo ezahlukene, Nokho, mina namanje ukweluleka ngokukhetha BlackBerry amafoni smart hhayi ngaphandle isizathu.
isivinini ukulayeza — ikakhulukazi uma ibhizinisi lakho lincike Internet kanye e-mail address somyalelo ethile.
Noxhumana — nokuxhumana nabasebenzi noma abasebenzi, usebenzisa inethiwekhi yenkampani kusuka Bes 'RIM "izinkampani noma khulula Bes Express uhlelo.
izicelo ezengeziwe edingekayo — manje iPhone and Android amafoni smart zinikeza inombolo olukhudlwana izicelo, kodwa idivayisi BlackBerry -, ngaphezu kwakho konke, i uxhumano okusheshayo kwenethiwekhi yakho.
Torch smartphone asishintshi amasiko BlackBerry; empeleni ingase futhi anikele more, kodwa kungani? NgokoMthetho we-technical support Akunandaba ukuthi kungakanani uthanda Torch yakho, futhi angicabangi ukuthi kokuba izinhlelo eziningi engadingeki futhi izicelo, it kuzoxoxwa ikhiqize kakhudlwana. Futhi uma izidingo iklayenti ngisize nge Torch, ngizizwa acasuke. Ngenxa yalesi sizathu, mina ube nomuzwa wokuthi lo ezincane izici ezengeziwe enikeziwe umsebenzisi, ngcono. Ngemva kokulalela podcasts zakamuva ezivela BlackBerry (№ 057) kwakubonakala kimi ukuthi isipiliyoni sami namakhasimende kuhambisana ncamashi nalokho BlackBerry team wayechaza umsebenzisi maqondana Torch smartphone. Kungakhathaliseki ukuthi uthanda Torch noma cha, ngenxa nje yokuthi esizithandayo okulindelwe abasebenzisi ezithile. Idivayisi ubhekwa njalo ngokombono ukusebenza kahle kohlelo lokusebenza ngokuhambisana ukusetshenziswa salo esisebenzayo. Idivayisi, okubonakala besiyoba sikhulu kakhulu noma esindayo omunye umuntu kungase kungamsizi abe fit ephelele enye. Futhi abasebenzisi indlela ukufinyelela e-mail etheksthini plain imiyalezo ngokushesha, futhi ngokuvamile kuhluke ngokuphelele abasebenzisi ezahlukene.
Personally, ngingathanda ukwazi ukuthi BB6 operating system ukusebenza ngo kweminye imihlobo BlackBerry. Futhi mina ukusekela labo abathanda abenza asathungatha ubukhulu kudivayisi njengoba 9000 plus ne touch screen. Uma ukholwa ukuthi amahlebezi, smartphone 9900-Pluto-Magnum kungenye yezindlela esiphawuleka kunazo BlackBerry models. Noma OS entsha ku-smartphone VV6 Bold 9700 — futhi ngempela umxhwele, futhi ngisho ngaphandle esithintwayo. Le nhlanganisela of imiqondo "okusebenza / idivayisi ukusebenziseka" mayelana nokusetshenziswa kwegama lebhizinisi smartphone uthola inzuzo yayo ekhethekile professional.
Isifinyezo BlackBerry Torch 9800
Ngangikujabulela Torch smartphone njengoba idivayisi primary izinsuku ezinhlanu ngaphambi kokuba wabuyela isibonelo 9700. Ezinsukwini ezimbili ezedlule I kabusha waphendukela Torch futhi waqaphela ukuthi akubanga kubi njengoba kwakubonakala kimi lapho siqala wahlangana, kwaze kwaba yilapho ngiqala ukuyisebenzisa ngokuphelele. Yiqiniso, ngikuthola ngandlela-thile kunzima, futhi OS e BB6 Torch imisebenzi ezinzile futhi ngendlela efanele. Kodwa uma singazi acabangele entsha yesistimu yokusebenza VV6, Torch smartphone, isimiso, kubhekwe ngokwanele esingathí sina idivayisi BlackBerry, okufakazela iqiniso lokuthi inkampani «RIM» owayengase akwazi eliyingqayizivele Smartphones ayo uhlobo egcwele. Ngingasho kugcwale umlomo ukuthi kusukela iphuzu Ngenxa umsebenzisi ibhizinisi ingasetshenziswa ukuze afeze yonke imisebenzi edingekayo ezindaweni eziningi. nje-akhawunti yakhe mina ube nomuzwa wokuthi inkampani «RIM» kakhulu iphasela single, futhi ngesikhathi esifanayo, ngesikhathi esisodwa, kodwa empeleni akukhona lowo ngisebenzisa njalo futhi batusa ngamunye idivayisi ethize esetshenziswa ukwenza imisebenzi ethile isigaba ethile abasebenzisi.